09/05/2018 - Page 2 sur 3 -
Antsirabe : Tobin’ny masera, notafihina andian-jiolahy
Nisy nanafika indray ny tobin’ny masera tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambano. Jiolahy fito lahy no nanao ny fanafihana. Ny alin’ny alatsinainy teo no nitrangan’ny fanafihana. Tsy nisaron-tava ireo jiolahy ary basy kilalao sy kibay no …Tohiny
Fanafihana sy vonoan’olona : Voaheloka 5 taona ilay rangahy isan’ny tompon’antoka
Nisedra ny fotoam-pitsarana azy teny anivon’ny fitsarana ambaratonga ambony i Marcelin, ilay lehilahy voasaringotra tamin’ny fandraisana anjara mivantana tamin’ny fanatanterahana fanafihana mitam-basy, izay sady nandroba no nahafaty olona telo. Tamin’ny fihainoana ireo fiarovan-tenany mirakitra an-taratasy …Tohiny
Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena : Handray fepetra hentitra hiarovana ny sekoly sy ny fotodrafitrasa
Manoloana ny toe-draharaha mafampana eto amin’ny firenena ankehitriny, ka miteraka fanakorontanana sy fanimbana eny anivon’ny sekoly vitsivitsy eto an-drenivohitra toa ny hita teny amin’ny lisea Nanisana sy Jules Ferry Faravohitra, sy sekoly tsy miankina maromaro …Tohiny
Ankoatra ny maha minisitry ny Asam-panjakana azy, dia mpahay lalàna ( mpitsara) koa ny minisitra Maharante Jean de Dieu. Tsara toerana izy raha milaza ny fahitany izao toe-draharaha izao. Voafidim-bahoaka ny Filoha ka tsy tokony …Tohiny